Ka hadalka ku -xadgudubka mukhaadaraadka iyo qabatinka - Amjambo Africa
Gar ahaan gobalka Maine
Qaar kaloo badan
Ka hadalka ku -xadgudubka mukhaadaraadka iyo qabatinka
Oct 15, 2021 | 0
Waxaa Qoray Amy Harris
Dhaleeceyntu waxay ka hortagtaa wada hadal furan oo ku saabsan isticmaalka maandooriyaha
Si kastaba ha ahaatee, soo -galootiga dheeraa ee ku nool Mareykanka, oo si buuxda u qaataan dhaqanka Mareykanka, waxay u badan tahay inay cabaan khamriga oo ay isticmaalaa daroogada. Markaa, inta badan waa carruurta soogalootiga ah kuwa ugu halista badan inay ku dhacaan dhibaatooyinka maandooriyaha, maaha waalidkood.
Uma malaynayo in ku-xadgudubka mukhaadaraadka uu joogsan doono ilaa aan ka joojinno qarinta. Tanina waa xaqiiqda ka jirta bulshooyinka muhaajiriinta ah
—Cabdul Cali, barre, dhaqdhaqaaqa, iyo abwaan
Kuwa ku xad -gudba maandooriyaha waxay halis weyn ugu jiraan inay qariyaan isticmaalkooda oo aysan caawimaad weydiisan sababta oo ah dhaleeceynta iyo ceebta la xiriirta isticmaalka maandooriyaha ee bulshooyin badan oo soo -galooti ah. Dadka qabatimay marar dhif ah ayay raadsadaan xirfadlayaal caafimaad si ay caawimaad ugu helaan dhibaatadooda.
Krista Hall, oo ah agaasimaha kiliinikada ee Gateway Community Center, oo ah urur ku takhasusay daryeelka ay u baahan yihiin muhaajiriinta, ayaa yiri, “[Isticmaalka maandooriyaha] waa wax aan la aqbali karin oo aan aad iyo aad u dhif u maqalno qof kasta oo halgamaya. Tirakoob ahaan marka laga hadlayo, waxaa hubaal ah in ay jiraan dad ay tahay in ay qabaan dhibaatooyin maandooriye; si kastaba ha ahaatee, waa dhif iyo naadir in la shaaciyo. Waxaan leenahay, waagii hore, dad kala duwan ayaa wax naga weydiiyay ikhtiyaarada daaweynta ku -xadgudubka mukhaadaraadka, waxayna u muuqataa inaysan jirin wax dhab ah oo ku habboon dadkan [muhaajiriinta] ah.
Aragtida akhlaaqda ee ku -xadgudubka mukhaadaraadka ayaa shidaya ceebta Si kastaba ha noqotee
Muhaajiriin badan, sida kuwa ka soo jeeda qaaradda Afrika, waxay u arkaan balwadda inay tahay in ku jirta dabeecadda anshaxa ee qofka, halkii ay ka ahaan lahayd cudur. Iyada oo la adeegsanayo muraayaddan, isticmaalka maandooriyaha ayaa ah ikhtiyaar shaqsiyeed, dadka ku xad -gudba maandooriyaha ayaa daciif ah, musuqmaasuq ah, ama dembi leh, halkii ay xanuunsan lahaayeen.
Talooyin looga hadlo caruurta ku saabsan isticmaalka maandooriyaha
• Caruurta waxy wax ka bartan maandooriyaha, khamriga, iyo walxaha iyagoo da ‘yar, markaa bilaw inaad la hadasho markay yar yihiin.
• Weydii carruurtaada su’aalo ku saabsan waxay maqleen ku saabsan daroogada iyo khamriga, iyo meesha ay ka maqleen.
• Naftaada wargeli si aad carruurtaada u siiso macluumaad sax ah.
• Maskaxda fur oo isku day in aadan caadifad qaadin. Dhageyso marka hore, ficil labaad.
• Samee xuduud iyo filasho cad. U sheeg carruurta in aad xadaynayso sababta oo ah adiga ayaa daryeela iyaga.
Odette graduated from Portland Adult Education in 2017. She took a CNA course while studying for her high school equivalency HiSET exam. “It was a great experience for me. It changed everything. This picture is a symbol of us making great things together. My daughter took a babysitting class to be able to babysit my son while I was working and going to school. Before that, friends from MidCoast New Mainers Group babysit the children for me. We have each other and we have great friends and community. It makes a huge difference,” she said.
Odette Zouri, oo ah ardey kalkaaliso ka ah Burkina Faso oo hooyo u ah gabar 16 jir ah iyo wiil 11 jir ah, ayaa ka hadashay ceebta la xiriirta balwadda. “Ceeb aad u badan ayaan ku haynaa bulshooyinkayaga. Waan isku ceebaynnaa arrintaas. Kama hadalno ku -xadgudubka mukhaadaraadka cudur ahaan … dadku waxay u arkaan balwadda inay tahay doorasho. [Taasi] waxaad rabtaa inaad qabatimto.
Shaqaalaha bulsheed ee Caafimaadka Weyn ee Portland Molly Fox ayaa ka sheekeysay waayo-aragnimada macmiil ka yimid Suudaan oo isticmaalay aalkolo iyo ka-hortag si uu ula qabsado xanuunkiisa walbahaarka ka dib (PTSD). Macmiilku wuxuu dareemay ceeb aad u weyn oo ku saabsan adeegsiga maandooriyaha, mana arki karin xiriirka ka dhexeeya maandooriyaha uu isticmaalayo iyo dadaalkiisa ku aaddan inuu la qabsado PTSD -da, oo ah xaalad caafimaad maskaxeed oo halis ah oo uu u bahana taageero iyo caawimaad. Wuxuu naftiisa ku canaantay maandooriyaha. Fox waxay ka warbixisay cabsi baahsan oo ku saabsan qaadashada daawooyinka dhakhtar qoray, iyadoo qaarkood ay u jeestaan aalkolo si ay u kabuubiyaan xaaladaha sida xanuunka ama hurdo la’aanta.
Khamriga si fudud loo heli karo ayaa kabuubinaya jaahwareerkii qamriga.
Khamrigu waa maaddada ugu badan ee lagu xadgudbo muhaajiriinta, oo odayaasha iyo dhallinyaraduba waxay u isticmaalaan inay \_”kabuubiyaan ama iska iloobaan dhaawaca,\_” sida uu sheegay baraha, dhaqdhaqaaqa, iyo abwaan Cadul Cali. Sahanka Caafimaadka Dhallinyarada ee Isku -dhafka ah ee Maine ee 2019 ayaa lagu ogaaday in 23% ardayda dugsiga sare ee Maine ay cabbeen aalkolo ugu yaraan 30kii maalmood ee la soo dhaafay. Cali, bilowgii hore ee khamriga ayaa ugu dambayntii ku dhammaatay laba sano oo xarig ah Xarunta Horumarinta Dhallinyarada Long Creek.
Xaaladda jahwareerka leh ee isticmaalka marijuana sharci ah ee Maine
Marijuana waa walax kale oo diyaar u ah oo inta badan laga isticmaalo Maine. Laakiin inkasta oo marijuana ay sharci ka tahay gobolka, isticmaalkeeda wali waa dembi federaal ah, oo qabashadu waxay halis gelin kartaa codsiga muwaadinimada qoyska. Ku dhowaad afartii mid ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Maine ayaa ka warbixiyay isticmaalka marijuana 30 -kii maalmood ee la soo dhaafay ee Sahanka Caafimaadka Dhallinyarada Maine ee 2019.
Ka ilaalinta Jiilka soo socda Badbaadinta Maandooriyaha.
Ali iyo Zouri waxay ku biiraan kuwa kale iyagoo ku eedeynaya tabo dhaqameed iyo diimeed oo ku xeeran isticmaalka khamriga, iyo sidoo kale walaaca ku -soo -boodka, isticmaalka sare ee maandooriyaha. Ma doonaysid in bulshada oo dhami ku calaamadiso oo ku calaamadiso qoyskaaga, ama ku calaamadiso soo -galooti kasta oo ku salaysan waayo -aragnimadaada.
Waalidiinta qaarkood, diinta ama dhaqanka ayaa mamnuuca dhammaan isticmaalka mukhaadaraadka ama khamriga. Zouri wuxuu soo tebinayaa in waalidiintu ay carruurtooda u dooran karaan xiisadaha waxbarashada caafimaadka sababta oo ah waxay \_”ka baqayaan inay lumiyaan dhaqankooda, inay lumiyaan qiimahooda.
Abusana Micky Bondo
Tani waxay micnaheedu noqon kartaa in iyaga, ama carruurtooduba, aysan baran macluumaad sax ah oo ku saabsan halista caafimaad ee maandooriyaha ama noocyada maandooriyaha ee laga yaabo inay ku soo gaaraan halkan Maine. Carruurta ku nool bulshooyin badan oo soo -galooti ah ayaa wax ka barta daroogada iyo khamriga asaaggooda iyo warbaahinta bulshada, halkii ay ka baran lahaayeen dadka waaweyn.
Awoodda hoggaamiyeyaasha diinta iyo bulshada
Qofka soo kabanaya Cabdul Cali wuxuu rumaysan yahay in sida keliya ee looga gudbi karo dhaleeceynta iyo ceebta ay tahay in hoggaamiyeyaasha diinta ee masaajidda iyo kaniisadaha ay hormuud u noqdaan ka hadalka si furan oo ku saabsan maandooriyaha. Asal ahaan wuxuu ka yimid Itoobiya, Cali hadda wuxuu ka diiwaangashan yahay Kulliyadda Bulshada ee Koonfurta Maine. Kuliyada Bulshada. Wuxuu sheegay in dhaleeceyntu ay aad ugu weyn tahay bulshadiisa Galbeedka Afrika ee Muslimka ah marka marka xubin ka tirsan bulshada uu u dhinto xad -dhaaf ah, aan laga hadlin sababta dhimashadooda – oo aan looga hadlin qoyska, saaxiibbada, iyo hoggaamiyeyaasha diinta. Isaga oo u diyaargaroobaya aaskii aasitaanka saaxiibbo badan oo ku dhintay masaajidkiisa xad -dhaaf Wuxuu sheegay in imaamyadu ay ka warqabaan dhibka ay balwadda opioid -ku ku hayso bulshadooda, ay aaminsan yihiin inay dhibaato tahay, laakiin aysan hubin sida loo “maareeyo.”
Ka hadalka isticmaalka maandooriyaha si loo soo afjaro dhaleeceynta iyo badbaadinta dhallinta years Sanadihii la soo dhaafay.
Iskaashiyo iyo hindisayaal guuleysta ayaa laga bilaabay Maine oo ujeedkoodu yahay in laga bilaabo wada hadal ku saabsan adeegsiga maandooriyaha ee bulshooyinka muhaajiriinta ah. Intii ay joogta Portland iyo New Mainers Initiative Health Public Initiative ee Lewiston waxay iska kaashadeen inay dhexdhexaadiyaan shan kooxood oo diirada saarnaa xagaaga waxayna bilaabaan wada hadal furan oo ku saabsan ku -xadgudubka mukhaadaraadka. Hogaaminayay Micky Bondo iyo Odette Zouri, wadahadaladaan waxay isu keeneen waalidiinta iyo dhalinyarada, da’doodu u dhaxayso 16-21, kana soo jeeda aaga weyn ee Portland, LewisWaxaaton, iyo Bath. Laba barayaal khalkhalka maandooriyaha oo ka socda Dugsiyada Dadweynaha Lewiston ayaa iyaguna ka soo qayb galay.
Odette and children
Time to Ask, oo ah hindise ka yimid Isbahaysiga Waxbarashada Caafimaadka ee Maine, ayaa dhowaan tijaabin doonta barnaamij ay la leedahay Greater Portland Health, sidoo kale waxay la shaqayn doontaa bulshada iyo hoggaamiyeyaasha diinta si ay u siiyaan baaritaan dhaqameed oo karti u leh isticmaalka maandooriyaha
Ka sokow hogaamiyaha bulshada iyo kuwa diinta iyo bixiyeyaasha caafimaadka, khubarada caafimaadka waxay rumaysan yihiin in waalid ku kala hadlaan carruurtooda isticmaalka maandooriyaha. Zouri, oo ah dhexdhexaadiyaha kooxaha ka -faa’iideystaha isticmaalka maandooriyaha iyo waalid qudheeda, ayaa tiri, “Waa inaad la qabsataa halista halkan. Oo balwadu waa halis halkan, sax? Markaa waa inaad wadahadal ka yeeshaa. Kuwani waa waxyaabo aad la kulmi doonto. Waa inaad taqaanaa waxa la sameeyo haddii ay kugu dhacdo. U sharax carruurta inaadan u baahnayn inaad qof ka farxiso ama wax aan raaxo kuu lahayn kuu samayso. Ka hadal cadaadiska asxaabta iyo rabitaanka ku habboonaanta, ”ayay tiri. Faafida ayaa “culeys aan hore loo arag ku ridday dadka Maine ee da’ walba leh, taasoo horseeday kororka isticmaalka khamriga, isticmaalka daroogada sharci darrada ah, iyo dabeecadaha kale ee halista ah, ”ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray Gov. Janet Mills. Ka hadalka ku -xadgudubka mukhaadaraadka si furan waa hal talaabo oo la maro waddada dheer ee ka -goynta dhaleeceynta la xiriirta balwadda.
PreviousCaymiska ganacsiyada yaryar
NextKa -hortaga sonkorta, ogaanshaha, daaweynta.
Caabuq kasta oo tiibayda (qaaxada) waxay u baahan tahay daaweyn
Kahadalida cudurada galmada lagu kala qaado inkasta oo dhaleeceyn
Karkootne Hibiscus waxay cabtaa cabitaannada Maine
Khayaanada naxdinta leh
Hubso in lacagtu ay ka rabto halka aad rabto markii aad ku dhinto